YEYINTNGE(CANADA): Thursday, March 25
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/25/20100အကြံပြုခြင်း
http://ifile.it/mh0ibat25 March2010 Yeyintnge Diary
သတ္တ၀ါမှန်သမျှ ဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက် ဖြစ်တော့သည်။
ဒါကတော့ . . . တရားသဘောအရပင်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးဆပ်မှုများကတော့ . . . ပျက်လိုက်ဖြစ်လိုက် (ပျက်ဖြစ်)ပင် ဖြစ်တော့သည်။
ဤတွင် . . . ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားသဘောကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဗုဒ္ဓ၏ဟောကြားချက်ကို ဖီလာပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒိဋ္ဌိအယူစွဲများ မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်များသာဖြစ်သည်။
မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာကို လက်ကိုင်ပြု၍ ကျင့်ကြံပွားများနေသူတို့သာ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် . . . ``ဖြစ်ပျက်´´လောကကြီးထဲတွင် ရပ်တည်နေကြရင်းနှင့် အများအတွက် အကျိုးရှိစေမည့်၊ အကျိုးပြုစေမည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို လုပ်ကိုင်ရာ၌ ``ပျက်ဖြစ်´´ လုပ်ငန်း၊ လမ်းစဉ်တို့ကို ကျင့်သုံးမိတော့သည်။
အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြရသော် . . . ကျွန်ုတို့၏ လူမှုရေးအသင်းဖြစ်သော နာရေးကူ ညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် သေဆုံး (ဘ၀ပြောင်း)သွားသူတို့၏ ရုပ်ကလာပ် များကို သင်္ဂြုလ်ပေးခြင်းတို့သည် ဖြစ်ပျက်ကို ရှုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မွေးလာလျှင် သေဆုံးဖို့ ခြေလှမ်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘယ်နေ့သေမည်၊ ဘယ်အချိန်သေမည်၊ ဘယ်နေရာတွင် သေမည် ကိုတော့မသိနိုင်။ သို့သော် . . . သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပေးဆပ်မှုများ သည်ကား ပျက်ဖြစ်ပင်ဖြစ်တော့သည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် . . . လူဆိုသော သတ္တ၀ါတို့သည် မွေးဖွားခြင်း (ပဋိသန္ဓေနေခြင်း) နှင့် ခန္ဓာအိမ်မှ ထွက်ခွာမှု (သေဆုံးခြင်း) ဆိုသည့် ကြားကာလတွင် စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှား သံသရာလည်ပတ်နေကြသည်။ ထိုသံသရာစက်ဝိုင်းအတွင်း လည်ပတ်နေစဉ်ကာလ၌ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ခြေလက်ကျိုးပဲ့ခြင်း၊ အစာအိမ်ထိခိုက်ခြင်း၊ နှလုံးထိခိုက်ခြင်း၊ မျက်စိထိခိုက်ခြင်း စသဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်၏ ဦးခေါင်းမှ ခြေဖ၀ါးအဆုံး ဖေါက်ပြန်/ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခြင်းများကို အပျက်သဘောအားဖြင့် ကြုံတွေ့ကြရမည်ဖြစ်သည်။ သက်မဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်သော နာရီ၊ ပန်ကာ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ စက်ဘီးစသည်တို့လည်း ဖန်တီး/ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့့် "ဖြစ်” ၍ သုံးစွဲ/ယိုယွင်းခြင်းအားဖြင့် “ပျက်”ခြင်း တို့ပင်ဖြစ်တော့သည်။ ယင်း သက်မဲ့ပစ္စည်းများ ချို့ယွင်း ပျက်စီးခဲ့ပါက လူသားတို့သည် ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲကြသကဲ့သို့ လူသားတို့၏ ချို့ယွင်း ဖျက်ဆီးမှု တို့ကို မည်သူတို့က ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို လုပ်မည်နည်း။
လူအချင်းချင်း စာနာစိတ်များထားရှိရန် ကျွန်ုတို့၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်တော့သည်။
လူအချင်းချင်း မေတ္တာစိတ်များပွားများရန် ကျွန်ုတို့၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်တော့သည်။
လူအချင်းချင်း ဂရုဏာစိတ်များထားရှိရန် ကျွန်ုတို့၏ တာဝန်ပင်ဖြစ်တော့သည်။
ဤတာဝန်၊ ၀တ္တရား၊ ခံယူချက်တို့ကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ လာရောက် ခိုင်းစေတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းမဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လူပီသသော အသိဥာဏ်၊ လူပီသသော ခံယူ ချက်၊ လူပီသသောဝတ္တရားများသည် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရသောဘ၀ရဲ့ သင်ခန်းစာ၊ ဘ၀ရဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ ဘ၀ရဲ့ နာကျည်းချက်၊ ဘ၀ရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များနှင့် ပဏ္ဍိတဆရာသမားများ ၏ ဆုံးမမှုများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလုပ်ကာ ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ် အတိုင်းလျှောက်လှမ်း ကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဤသို့ ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်၊ ဗုဒ္ဓရဲ့အလိုတော်ကျ လျှောက်လှမ်းရင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ပျက်ဖြစ် ပေးဆပ်မှုများ၊ ပျက်ဖြစ်စာနာမှုများ၊ ပျက်ဖြစ် ဂရုဏာထားမှုများကို ရှင်းပါအံ့။
သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသို့ လာရောက်ပြသကြသော လူနာများသည် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်၍ လာကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့၏ ခန္ဓာမှ သွေးသားဖေါက်ပြန်မှုများကြောင့် သွေးသား ပျက်စီးမှုကြောင့် လာရောက်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသို့သော ပြုပြင်ကုသပေးနိုင်သော လုပ်ရပ်များကို ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားအချင်း ချင်း ဂရုဏာစိတ်ထားကာ ကုသိုလ်ဖြစ် အခမဲ့ပြုပြင်ကုသပေးမှုများ လုပ်ခဲ့သည်မှာ မရေတွက် နိုင်တော့ပါ။ ကုသိုလ်ဖြစ်ကုသပေးသော ဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထောက်ပံ့ပေးသော ဆေးဝါးများကြောင့် ``အပျက်´´ (နေမကောင်းဖြစ်ခြင်း) မှ နောက်ဆုံး အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပျက်ရသော သေခြင်းတရားမတိုင်ခင် ``အဖြစ်´´ (ကျန်းမာနေကောင်း လာခြင်း) သို့ ရောက်ရှိလာစေရန် စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာပင် မျက်စိတိမ်စွဲ၍ အမြင်အာရုံမရှိသော လူနာများအတွက် မျက်စိခွဲစိတ် ပေးကာ အမှောင်ဘ၀မှ အလင်းဘ၀သို့ ရောက်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးဆပ်ခြင်းမှာလည်း အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအလို့ငှါ အပျက်မှအဖြစ်သို့ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းပင် မဟုတ်ပါလား . . . .
အောက်ဖေါ်ပြပါ အထွေထွေ ရောဂါဝေဒနာသည်များနှင့် မျက်စိဝေဒနာရှင်တို့၏ ``အမှောင်မှ အလင်း´´ ``အပျက်မှအဖြစ်´´ ဘ၀သို့ရရှိရန် ရောက်ရှိလာကြသော သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း လူနာတို့၏ ရင်တွင်းခံစားချက်တို့နှင့် ဓါတ်ပုံများကို တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
အထွေထွေ လူနာများ၏ ဓါတ်ပုံများနှင့် ရင်တွင်းခံစားချက်များ
မျက်စိဝေဒနာရှင်များ၏ ဓါတ်ပုံများနှင့် ရင်တွင်းခံစားချက်များ
ထိုနည်းတူစွာ . . . ကျွန်ုပ်၏ နှလုံးသားထဲ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော အဘ ဦးသန်းမြင့်နှင့် ကျွန်ုပ်ဆုံဆည်းမှုကို တင်ပြပါမည်။
လွန်ခဲ့သော ( ၄ )နှစ်ခန့်က ကျွန်ုပ် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းသွားစဉ် ဗျိုင်းရေအိုးစင် (တာမွေ) မြို့နယ်တွင် အဖိုးအိုတစ်ဦး သစ်သားထောက်တံဖြင့် လမ်းကို တစ်လှမ်းခြင်း လျှောက်လှမ်းနေ သည်ကို မြင်တွေ့ရ၍ အဘအတွက် ငွေတစ်ထောင်လှူခဲ့သည်မှ စတော့သည်။
ဦးသန်းမြင့် - တာမွေ (Wheel Chair)
အဘနာမည်က ဦးသန်းမြင့်ပါ။ ကမ္ဘာကျော်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်၊ ပရိဘောဂဆိုင် တာမွေပလာဇာနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှေ့မှာ နေတယ်။ နာဂစ်ပြီးမှ အဘ ဒီိကိုရောက်လာတာ။ ဟိုတုန်းကတော့ ၁၅၇ လမ်းက မိတ်ဆွေတစ်ယောက် အိမ်မှာနေတယ်။ သူတို့ ရွှေပြည်သာကို ပြောင်းသွား တယ်။ အဘကို ထားခဲ့ကြတယ်။ ထားခဲ့တဲ့အတိုင်း အဘ နေတာပဲ။
အတိတ်ရယ်၊ ပစ္စုပ္ပန်ရယ်၊ အနာဂတ်ရယ် အဘပြောချင်တာက အတိတ်ကို ထားလိုက်တော့ အခုပစ္စုပ္ပန်မှာ အဘကို ဦးကျော်သူက ကူညီခဲ့လို့ အခုပစ္စပ္ပုန်မှာ အဘ ရပ်တည်နေနိုင်တာ မနက်ဖြန် အဘ ဘာဖြစ်မလဲ မပြောနိုင်ဘူး။ လမ်းထွက်သွားရင် ယာဉ်အန္တရာယ် ယာဉ်ကြော အဘ တိမ်းရှောင်ပြီး သွားနေရတယ်။ အဘ ဆေးရုံက ဆင်းလာတယ်။ တစ်နှစ် တိတိ သူများအိမ်မှာ နေတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ် အဘခံစားခဲ့ရတယ်။ သာမာန်လူကောင်း တစ်ယောက် မဟုတ်ဘူး။ သူများလို အလူမီနီယံနဲ့ မသွားနိုင်ဘူး။ သစ်သားလေးချောင်း ထောက်လေးနဲ့ ကျွန်းသားနဲ့ လုပ်ထားတာလေးနဲ့ အဘ ဟော..ဒီလို ထော့နဲ့ ထော့နဲ့ သွားရတယ်။
ပထမဦးဆုံး ဦးကျော်သူနဲ့ ဗျိုင်းရေအိုးစင်လမ်းရဲ့ လမ်းအလယ်ခေါင်မှာ လက်တစ်ဖက်က ပတ်တီးလေးနဲ့ ကားခေါင်းခန်းမှာ ထိုင်နေတယ်။ အဘ မိုးရေထဲမှာ ဖြေးဖြေးနဲ့သွားတယ်။ သူက လက်ထဲမှာ တစ်ထောင်တန် ထုတ်ပေးပြီးလှူတယ်။ အော် .. ဦးကျော်သူ သူက မုတ်ဆိတ်မွှေး၊ ပါးသိုင်းမွှေးတွေနဲ့ အဘကို တစ်ထောင်တန် ပေးတယ်။ အော် .. ဦးကျော်သူ ကျွန်တော် လက်မခံပါရစေနဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲ အဘလို့ သူက ပြန်မေးတယ်။ ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို ဘာအလုပ်တစ်ခုမှ လုပ်မပေးခဲ့ဖူးဘူး .. မဟုတ်ဘူး .. ကျွန်တော် သဒ္ဒါပေါက်လို့ အဘကို လှူတာပါတဲ့ .. အချိန်မရွေး လိုအပ်တဲ့ အကူအညီ ရှိရင်ပြော ကျွန်တော် ဆီလာခဲ့ပါတဲ့ .. တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ အခါကျမှ အဘကို ယောဂီဝတ်နဲ့ အဘွားကြီး တစ်ယောက်က ဦးသန်းမြင့် ရှင် .. ဦးကျော်သူဆီ သွားပြီး အကူအညီ တောင်းကြည့်ပါလား .. သွားနိုင် လာနိုင်အောင်လို့ပေါ့ .. ရရင်လည်း ရမယ် .. မရရင်လဲ မရဘူးပေါ့။ ဒါနဲ့ အဘလည်း TAXI အငှားကားလေးနဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းမှာရှိတဲ့ နာရေးကူညီမှု ရုံးကိုသွားပြီး သူ့ကို အကူအညီတောင်းတယ်။ ဟိုလဲရောက်ရော ဦးကျော်သူက ကင်မရာယူပြီး အဘကို ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်။ သောကြာနေ့မှာ သွားတယ်။ တနင်္လာနေ့မှာ Wheel Chair လာပေးတယ်။ အဘ အိပ်မက်ထဲတောင် မမက်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီ Wheel Chair ပေးတဲ့နေ့က အဘကို ဦးကျော်သူ ကိုယ်တိုင်လာခေါ်တယ်။ ဟိုလည်းကျရော အဘ ဒီမှာ Wheel Chair တဲ့ .. ကျွန်တော် ကူညီမယ်လို့ ပြောထား ပြီးပြီတဲ့ .. အဘ ပီတိတွေဖြစ်ပြီး မျက်ရည်တွေ ကျတယ်။ ဦးကျော်သူ ဘာပြောလဲသိလား … ?
`` ကျွန်တော်လိုချင်တာ ဒါပဲတဲ့ .. လူတစ်ယောက်ရဲ့ ၀မ်းသာပီတိကို .. ။ ´´
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သန်းပေါင်းမြောက်များစွာ ချမ်းသာတဲ့ လူတွေအများကြီး ရှိတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့ လူတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ ဒွန်တွဲနေတဲ့ထဲမှာမှ အဘကို လှူနိုင်တဲ့လူ သူဟာ ဦးကျော်သူ တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။
သံဃာတော်တွေ ဆန္ဒပြတုန်းက စစ်ကားတွေ Round လှည့်နေတယ် .. လူတိုင်းက ပြောတယ် .. ခင်ဗျားတဲ့ ဒီစာတန်းလေး ဖြုတ်ထားလိုက်ပါလား .. ဘာလို့ ဖြုတ်ရမှာလဲ .. ဒါ……..ကိုယ့်ရဲ့ အသက်သခင် ကျေးဇူးရှင် .. ဒီ Wheel Chair အနောက်က စာတန်းက အဘရဲ့ ရင်ထဲက ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ရေးထိုးထားတာ
ကျွန်တော် ညအိပ်ရာဝင်တော့မယ်ဆို အမြဲတမ်း ဦးကျော်သူက ကျွန်တော့်ထက် အသက် အများကြီး ငယ်ပါတယ်။ ကျန်းမာပါစေ .. ချမ်းသာပါစေ .. အမြဲတမ်း ကျွန်တော် မေတ္တာပို့တယ်။ ဟိုတစ်ခါကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အဘ BBC နားထောင်တယ်။ VOA နားထောင်တယ်။ လူများတွေက လာပြောတယ်။ သူတို့ပြောတာတွေ အဘ ကိုယ့်ဦးနှောက်နဲ့ ချင့်ချိန်လိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ .. မှန်တာလုပ်ရင်တော့ အမှန်အတိုင်းပဲ ဖြစ်ရမှာပဲ .. အချိန်တန်တော့ အမှန်တိုင်းဟာ အမှန်တရားအတိုင်း သူ့ဟာသူ ပြီးသွားတာပဲ။ အလင်းတန်း ဂျာနယ် အဘ အပါတ်တိုင်း ၀ယ်ဝယ်ဖတ်တယ်။ ဟိုတုန်းကဆို ဦးကျော်သူပုံ နာရေးကူညီမှု အသင်း အလှူငွေ လက်ခံတဲ့ပုံ အမြဲတမ်းပါတယ်။ အခု လုံးဝသူ့ နာမည် မပါဘူး။ သူ့ ဓါတ်ပုံတွေလည်း မတွေ့ရတော့ဘူး။ အခုကြည့် ခိုင်ရွှန်းလဲ့ရည် နာရေးကူညီမှုအသင်း အလှူငွေ လှူဒါန်းတာတွေ ဘာတွေ ဦးကျော်သူ နာမည်တစ်ချက် မပါဘူး .. ဓါတ်မှန်ခန်းအတွက် ဆိုလားပဲ …. ။
နောက်ပိုင်း ဟိုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးကတည်းက လုံးဝ သူ့ပုံ မပါတော့ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ မနှစ်က ၁၂ လပိုင်းလား မသိဘူး။ ကျားကွက်သစ်မှာ နာရေးအတွက် ဦးကျော်သူကား ကျောက်မြောင်းလမ်းကနေ ကွေ့ဝင်သွားတော့ အဘ တွေ့လိုက်တာနဲ့ အဘချက်ချင်း Wheel Chair တွန်းပြီး လိုက်သွားတာ .. ခုနက နိဗ္ဗာန်ယာဉ် ဘယ်သွားလဲ .. ? အဲ့ဒီဘက်ကို ဆင်းသွားတယ်တဲ့ .. ဓမ္မ၀ိဟာရလမ်း ထဲကနေ။ ဟိုး .. စိုင်းထီးဆိုင်နေတဲ့လမ်းလေ။ ဟိုး .. ကျားကွက်သစ်ကျတော့ လမ်းကလည်း တော်တော်ဆိုးတာ .. အဘ သွားလဲသွားရော သူနဲ့ထိပ်တိုက် တွေ့ရော .. စကားပြောဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ရုပ်ရှင်လဲ မရိုက်ရအောင် .. ဗီဒီယိုလဲ မရိုက်ရအောင် အကုန်လုံးပိတ်ထားတယ်။ အဲ့တော့ ဦးကျော်သူက နှုတ်ခမ်းမွှေး .. ပါးသိုင်းမွှေးနဲ့ အသားတွေမည်းပြီး ဆံပင်လည်း ရှည်လာတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက် Wheel Chair လှူတုန်းက ဟို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလေ ရုပ်ရည်များဆို တခြားစီပဲ ယူပစ်သလိုကို ဖြစ်သွားတာပဲ။ အဘကြည့်ပြီးတော့လေ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ . . . . ။
ဦးကျော်သူကနေပြီး အဘအတွက် T-Shirt လေးလဲ လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။ အဘရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်စာများ ၀ယ်ယူဖို့အတွက် ဦးကျော်သူကနေ ပိုက်ဆံ ၁၀၀၀၀/- (တစ်သောင်းကျပ်)ကို ထပ်မံလှူဒါန်း လိုက်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆေးခန်းကို တစ်ခါ နေမကောင်းလို့လေ .. Wheel Chair နဲ့ တာမွေကုန်းကနေ တက်ပြီးတော့ သုခဆေးခန်းလေး အဲဒီနေ့ သောက်ဆေးတွေလဲ အများကြီးပေးလိုက်တယ်။ အဘကို ပိုက်ဆံ ၃၀၀၀/- (သုံးထောင်ကျပ်) ထပ်ပေးလိုက်သေးတယ်။ အဘ ထမင်းဝယ်စားနော် .. လ္ဘက်ရည်သောက်နော် .. ကျွန်တော် လက်မခံ ပါရစေနဲ့ပြောလဲ မရဘူး အတင်းပဲ။ သူ့အမျိုးသမီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ က အဘတဲ့ အဘကို ဒီတစ်ခါပဲ တွေ့ဖူးသေးတယ်တဲ့ အရင်တုန်းက ဓါတ်ပုံထဲမှာပဲ တွေ့ဖူးတယ်တဲ့။ ဦးကျော်သူတစ်ယောက် ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့ ရှိပါစေလို့ ကျွန်တော် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ။
အဘ ဦးသန်းမြင့်ကဲ့သို့ပင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါး၍ မသန်မစွမ်းဖြစ်နေသူ တို့ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှ ကူညီပံ့ပိုးမှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့မှုများအား အောက်ပါပုံများနှင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။
အချုပ်ဆိုရသော် . . . ကုသိုလ်ပြုရာတွင် လူသည် တိရစ္ဆာန်ထက်သာသလို အကုသိုလ် ပြုရာတွင်
လူလေးမျိုှးရှိရာ၌ . . . အမှောင်ကလာပြီး . . . အမှောင်သွားမည့်လူ၊
အလင်းကလာပြီး . . . အမှောင်သွားမည့်လူ၊
အမှောင်ကလာပြီး . . . အလင်းသွားမည့်လူ၊
အလင်းကလာပြီး . . . အလင်းသွားမည့်လူ ဟူ၍ ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကား အလင်းကလာပြီး . . . အလင်းသွားမည့် လူဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေကြသည်။
သို့ကြောင့် . . . ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပျက်ခြင်း
ရှင်ခြင်းနှင့်သေခြင်းတို့တွင် သေခြင်းသည် အဆန်းမဟုတ်။ ``ကံ´´ တစ်ခုနဲ့ ပိုင်းခြားလိုက်သည့်အတွက် ဘ၀တစ်ခု ကုန်ဆုံးသွားခြင်းဟုဆိုငြားသော်လည်း မသေခင်စပ်ကြား … ခံစားနေရသော ဝေဒနာ၊ မစွမ်းမသန်ဖြစ်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ တတ်နိုင်သလောက် ပျက်ခြင်းမှ ဖြစ်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိအောင် ကုသပေးခြင်း၊ အစားထိုးပေးခြင်းတို့ဖြင့် လူပီသအောင် မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာဆိုသည့် ဗြဟ္မစိုရ်တရားလက်ကိုင်ထားကာ အားထုတ်ကြိုးပမ်း၍ ကုသိုလ်အထုပ်များကို စုဆောင်းရင်း ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ လူမျိုးဘာသာမရွေး၊ (၇)ရက်သားသမီးအပေါင်းတို့ဖက်မှ ရပ်တည်ကာ အေးချမ်းသာယာဝပြောသည့် ငြိမ်းချမ်းမှု ပန်းတိုင်ဆီသို့ ချီတက်လျက်ရှိပါကြောင်း . . . . ။
ကမ္ဘာမြေပြင်သို့ အလည်အပါတ်ရောက်ခွင့်ပေး၍ … ဤကဲ့သို့ လူမှုရေး၊ ကုသိုလ်ရေး ကိစ္စအ၀၀ကို လုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးခဲ့သော၊ ဖန်တီးပေးခဲ့သော မိဘနှစ်ပါးနှင့်တကွ သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆရာ၊ ပဏ္ဍိတဆရာသမားများ၊ မြင်အပ် မမြင်အပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးတို့နှင့် မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက် ပေးဆပ်နေသော ကျွန်ုပ်၏ မဟေသီ - ရွှေဇီးကွက်အပြင် ဖခင်ဖြစ်သူ ကျွန်ုပ်အား သီလလုံခြုံရန် (ဆန်ရေ) လမ်းပြပေးခဲ့သော သား - ပြည်သိမ်းကျော်၊ သမီး - မြင့်မိုရ်ဦး တို့အား လေးစားဦးညွှတ်လျှက် . . . .
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (လွတ်မြောက်နယ်မြေ) ၏ သဘောထားရပ်တည်ချက်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဗုဒ္ဓေါဝါဒဆရာတော်က ရန်ကုန်မြို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်အား သြ၀ါဒကထာပေးပို.လိုက်သည်
အမေရိက ဦးအောင်ရွှေ (ဥက္ကဋ္ဌ)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ် ရက်စွဲ ၊ မတ်လ ၂၄ ၂၀၁၀
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်တွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေကြသည့် ဒကာ ဒကာမများအားလုံးကို အထူးတိုက်တွန်းလွှာ
သို.မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ. ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဟာ NLD အဆုံးသတ် မဖြစ်စေချင်ဘူး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ် ဒကာ ဒကာမများအားလုံး စိတ္တသုခ ကာယသုခပြည့်ပါစေလို. ဆန္ဒပြုပါတယ်၊
လွတ်လပ်ရေးရပြီးမှ မလွတ်လပ်ဘဲ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကစပြီး ယနေ.ချိန်ထိ ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူများ ဆင်းရဲဒုက္ခ မျိုးစုံခံနေရသည်၊ ၈၈ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ ပေါ်ပေါက်တော့ ဦးနေ၀င်းခေါင်းဆောင်တဲ့ စစ်အစိုးရကို လူထုကဖယ်ရှား နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သွေးနဲ. တထပ်တည်းတူတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်အောင် ၉၀ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်က ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင် စစ်တန်းလျားပြန်မယ် ဆိုတဲ့ ကတိကို ယုံပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ. ချုပ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရာမှာ မဲအပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့တယ်၊ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ဦးစောမောင်ပြီးရင်ဦးသန်းရွှေကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့တယ်၊စစ်အာဏာရှင်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က အခရာကြတယ်ဆိုတာ ၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ အဖြေပေါ်ခဲ့တယ်၊ဒါကြောင့် အဖွဲ.ချုပ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ရင် ပွဲကပြီးသလောက်ဆိုတာ သိတာမို. ယနေ.ထိ မလွတ်ဘဲထားတယ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်ဆိုတာ သေနတ်၊ဒေါ်စုကကျည်ဆံနှင့်တူတယ်၊နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် သေနတ်ပဲရှိပြီး ကျည်ဆံမရှိဘဲ ဖြစ်နေတော့ ထိထိ ရောက်ရောက် ဘာမှဖြစ်မလာဘူး၊အခုလဲ ကျည်ဆံမပါပဲ စစ်အစိုးရရွေး ကောက်ပွဲ စစ်မြေပြင်ကို သွားဖို. ကြိုးစားနေတဲ့ အဖွဲ.ချုပ်က လူအချို.ဘာဖြစ်လို. စိတ်ဓာတ်တွေ ဖောက်ပြန်ကြတာလဲ၊ ရွေတဂုံကုန်းပေါ်မှာ ကျခဲ့တဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ. သွေးတွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်က တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ် သစ္စာရှိရှိနဲ. လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက် ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်၊
(၁) အမျိုးသားညီလာခံမှာ စစ်အစိုးရနဲ.ပေါင်းပြီး ဆွေးနွေးယူရင် ရမယ်ထင်လို. အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်ကညီလာခံ
တက်ခဲ့တယ်၊မရမှန်းလဲသိ၊မတရားမှန်းလဲ သိရော ညီလာခံက ပြန်ထွက်လာတယ်၊စစ်အစိုးရနဲ. ပေါင်းမိလို. ထိုချိန်က အမှားတခုဖြစ်ခဲ့ပါပြီ၊သင်္ခန်းစာယူရမည်၊
(၂) ရဟန်းရှင်လူကျောင်းသားပြည်သူ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုံကြည်တယ်၊ဒေါ်စုမှာ
အရည်အချင်းတွေရှိတယ်၊သတ္တိဗျတ္တိအားရှိတယ် ဒါကို အဖွဲ.ချုပ်က တာဝန်ရှိသူတွေက ခြေရာတိုင်းတဲ့ သဘောနဲ.
အချင်းချင်းညီညွတ်မူမရတဲ့စကား၊စစ်အစိုးရအကြိုက်စကား၊ပြည်သူတွေ မနှစ်သက်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်တဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး
အောက်မှာ ဒူးထောက်ဖို. လုပ်ရပ်မျိုးဟာ တိုင်းပြည်က လူထုက အခုပဲ ဒေါသတွေဖြစ်နေပါပြီ၊
(၃) စစ်အစိုးရ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော် လူထုကို စည်းရုံးတယ်၊ယုံကြည်မူမရဘူး၊ဒေါ်စုမှအပ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ.ချုပ်က လူတွေလဲ မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး၊လုပ်လဲ ယုံကြည်မူမရခဲ့ဘူးဆိုတာ အားလုံးအမြင်ပါပဲ၊
(၄) မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကို ရဟန်းရှင်လူ ကျောင်းသားပြည်သူတွေက လက်မခံဘူး၊ဒါကို လူထုခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူနှလုံးကို ယူပြီး တော်လှန်ဖို. မတရားတဲ့ဥပဒေကို လုံးဝလက်မခံဘူး၊မှတ်ပုံတင်ရန် ဆန္ဒ
မရှိဘူးလို. ပြတ်သားတဲ့စကားဟာ ပြည်သူတွေက အားရတယ်၊အဲလိုမျိုး သတ္တိတွေကို ယုံကြည်လို. လူထုက ထောက်ခံ
(၅) ပြည်သူလူထုသဘောဆန္ဒနှင့် ကိုက်ညီတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မှတ်ပုံမတင်ဘူးလို. ပြောလိုက်ပြီ၊အမျိုးသားဒီမိုက
ရေစီအဖွဲ.ချုပ်အနေနဲ. ပြည်သူတွေဆန္ဒကို အလေးထားရမယ်၊ဒီကနေ. ပြည်သူတွေဆန္ဒကိုအလေးမထားလို. လူထုက စစ်အစိုးရကို မယုံကြည်ဘူး၊အဖွဲ.ချုပ်က လူထုဆန္ဒကို ဖီဆန်ရင် လူထုက အဖွဲ.ချုပ်ကို မယုံကြည်ဘဲ အထူးသဖြင့် သံဃာထုကြီးက စပြီး စစ်အစိုးရဆီ တည်ထားတဲ့ မြားက အဖွဲ.ချုပ်ကို ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံ ပြုသွားနိုင်ပါတယ်၊၊
(၆) သာသနာ့ဥသျှောင် မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒါဘိဝံသက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တွေ.ရင် ပေးလိုက်ဆိုပြီး
ဆရာတော်သြ၀ါဒ သိမ်းထားတယ်၊အဲဒီအထဲမှာ ‘’ ငါက စစ်အစိုးရကို လုံးဝမယုံဘူး၊အောင်ဆန်းစုကြည်က အင်္ဂလန်မှာ
နေပြီး မြန်မာပြည်ပြန်လာတော့ စစ်သားအစိုးရစကား ယုံတယ်၊ အနောက်နိုင်ငံက ခေါင်းဆောင်တွေလို ကတိတည်တဲ့
လူစားမျိုးထင်တယ်၊ဒါက သူ.အားနှဲချက်၊နောက်တခုက သူ.ပါတီအတွင်းက လူတွေကလည်း သူ.ကို လိန်တာပဲ အဲဒါကို
သတိထားဖို.လိုတယ်၊အောင်ဆန်းစုကြည်က အဖေတူသမီးမို. ပြည်သူတွေက သူ.ကိုယုံကြည်တယ်၊ငါကလဲ သူ.ကို
ယုံကြည်တယ်၊ဒါပေမဲ့ သူ.ပါတီကလူတွေကို ငါကမယုံဘူးလို. ဆရာတော်ကြီးကပြောခဲ့တယ်” အခုချိန်မှာ ပါတီအတွင်းက
တချို.လူတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာ သစ္စာမရှိရင် အဖွဲ.ရပ်တည်ဖို.ပြောပြော၊တိုင်းပြည်အတွက်ပဲပြောစေ လုံးဝ
(၇) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နယ်ချဲ.ကိုတော်လှန်ခဲ့တာ ပါတီမထောင်ပါဘူး၊တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်တွေနှင့် လူထုကို ဦးဆောင်ခဲ့တာပါ၊ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံမှာ ပါတီရုံးခန်းမရှိ၊၂၀၀၇၊ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ သံဃာများရုံးခန်း မပြောနဲ. ဘုဉ်းပေးစရာဆွမ်းတောင်မရှိဘဲ စစ်အာဏာရှင်ကို မလိုလားဘူးဆိုတာပြခဲ့ပါပြီ၊ နောက်ဆုံးအဆင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ.ချုပ် ဆိုင်းဘုတ်နှင့် ပါတီဆိုတဲ့ နာမည်ကိုပဲ စစ်အစိုးရဖျက်နိုင်မယ်၊ယုံကြည်ချက်နှင့် တော်လှန်ရေး စိတ်ဓာတ်တွေကို မဖျက်နိုင်ပါဘူး၊အဲဒီအထဲမှာ အသားထဲက လောက်ကောင် မထွက်ဖို. အရေးကြီးသလို ကိုယ့်အဖွဲ.ကိုယ်ဖျက်၊ကိုယ်လူ ကိုယ်ပြန်ထုတ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ပြည်သူတွေက လက်မခံ နိုင်တာကို အထူးသတိထားစေချင်ပါတယ်၊၊
(ဂ) ဆရာတော် သဘောထားကတော့ စစ်အစိုးရကို လုံးဝမယုံကြည်ဘူး၊တရားဥပဒေကို မလေးစားတဲ့ စစ်အစိုးရအား တရားဆွဲဆိုနေတာဟာ သဲထဲရေသွန်သလိုပဲ၊ဒါကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်ရဲ. သြ၀ါဒစရိယ ဆရာတော်များအဖြစ် အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ပြီး ရဲရင့်ပြတ်သားသည့် စာသင်တိုက် ဆရာတော်များကို အမြန်ဆုံး ရွေးခြယ်ပါ၊အဖွဲ. တံဆိပ်မလို အဖွဲ. ဆိုင်းဘုတ်ဖြိုချခံရတာ အရေးမကြီးဘူး၊တံဆိပ်နှင့် ဆိုင်းဘုတ်က ပြယုဂ်ပဲ၊အဟုတ်က ပြည်သူကပေးထားတဲ့ တာဝန်နှင့် ပြည်သူဆန္ဒအတိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်မူကို အဖွဲ.ချုပ်ထဲက လူတွေက ညီညွတ်ကြပါ၊
(၉)အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်က ဗဟိုအလုပ်အမူဆောင်များနှင့် ကမ္ဘာအေးဝင်းထဲက သံဃမဟာနာယက ဆရာတော် များဟာ စစ်အစိုးရ ချမှတ်တဲ့ သြ၀ါဒကို တသွေမသိမ်းလိုက်နာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ပြီ၊သာသနာနှင့် တိုင်းပြည် အတွက်တော့ဆိုးတာကနေ ကောင်းမလာခဲ့ဘူး၊ ဒီထဲမှာ သံဃမဟာနာယကဆရာများကလည်း သာသနာပြုဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးနဲ.၊ အဖွဲ.ချုပ် အလုပ်မူဆောင်များကလဲ ပါတီရပ်တည်ရေးဆိုတာကို အကြောင်းပြပြီး မိုးခြိမ်းသံကြားရုံနှင့် အိမ်တံခါးပိတ်ပြီး အိမ်ထဲမှာ ငုတ်တုတ် ထိုင်ခဲ့တာပဲ၊အမှန်က မိုးခြိမ်သံကို ကြောက်စရာမလို အိမ်ပြင်မှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ နွား၊ကြက်၊၀က်တွေကို လုံခြုံအောင် လုပ်ပေးရမည့်တာဝန်ရှိတယ်၊သာသနာနှင့် တိုင်းပြည်အပေါ် သံဃမဟာနာယကနှင့် အဖွဲ.ချုပ် အလုပ်မူဆောင် လူကြီးများ တာဝန်မကျေခဲ့ဘူး စစ်အစိုးရစကားကို အာမဘန္တေဆိုပြီး မဟာနာယကဆရာတော်နှင့် အဖွဲ.ချုပ်လူကြီးများက သံပြိုင်ဆိုခဲ့ကြသည်မှာ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ် ကျော်ခဲ့ပြီ၊ဒါကြောင့် တိုင်းပြည် ထိခိုက်ပါတယ်၊တိုက်ပွဲကို မရှောင်ဘဲ ပြတ်သားရဲရင်စွာ စစ်အာဏာရှင်ကို ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် အောင်ပွဲရမည်၊
(၁၀) အဖွဲ.ချုပ်နည်းတူ တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် အသီးသီး အဖွဲ.ခွဲများက လူထုနိုးကြားအောင် သြ၀ါဒစရိယဆရာတော်များ ထားပြီး
လူထုလုပ်ရှားမူ နယ်တွေမှာလဲ စရမည်၊၊
(၁၁) လူထုက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်ဆိုတာထက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်ပဲ ယုံကြည်တယ်၊ထောက်ခံတယ်ဆိုတာ လက်တွေ.အလုပ် လုပ်သူတွေသိနိုင်ပါတယ်၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ ယုံနိုင်လောက် တဲ့ အောင်ဆန်း သွေးတွေ ရှိနေတယ်၊ အဲဒီအချက်ကို ပြည်သူတွေက သိပါတယ်၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ ရွေတဂုံဘုရား တက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ ရန်ကုန်မြို.ရှိ လူထုဆန္ဒကို အမှန်တကယ်သိရမှာပါ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ် တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ. ပြည်သူလူထုနှလုံးသားကို လေးစားလိုက်နှာပြီး မတရားတဲ့သူတွေက တရားသဖြင့် မရှင်းဘူး၊ မတရားဖြင့်သာ ဆက်သွားမှာပဲ၊ တရားသဖြင့် ဖြစ်ချင်တဲ့ အဖွဲ.ချုပ်အနေနဲ. လူထုနှလုံးရည်ကို ကိုးစားပြီး မတရားတာတွေကို လူထုနဲ.အတူ ဆက်လက်၍တော်လှန်ရမည်သာဖြစ်ပါတယ်၊အဖွဲ.ချုပ်နောက်မှာ သံဃာတွေ အပြည့်အ၀ရှိနေပြီ ကျောင်းသားတွေက အဆင်အသင့်၊ လူထုတရပ် လုံးကလည်း ဒေါ်စု စကားကို ထောက်ခံတယ်၊ဒီအချိန်မှာ စစ်အစိုးရဲ. လှည့်စားမူကို မီးမောင်း ထိုးပြီး တက်ညီလက်ညီ မတရားတာမှန်သမျှ ဖီဆန်ကြရမည်၊၊
(၁၂) စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေက တိုင်းပြည်ကို မိန်.ခွန်းပြောတဲ့ လူမဟုတ်၊ဒီမိုကရေစီဆိုတာ လွတ်လပ်စွာ
သဘောထားကွဲလွဲခွင့်ဆိုတာမျိုး သူလဲနားမလည်ဘူး၊သူ.အောက်က ဗိုလ်ချုပ်တွေလဲ နားမလည်အောင် လုပ်ထားခဲ့ပြီ၊
ဒါကြောင့် မတရားတာလုပ်ဖို.ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်တွေအားလုံးက ညီညွတ်ခဲ့တာ အမြင်ပဲ၊အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်က
မတရားတာကို တော်လှန်ဖို.ပဲ၊မတရားမူတွေကို တော်လှန်တဲ့ နေရာမှာ ပြည်သူနှင့်အဖွဲ.ချုပ်ဟာ တသားတည်းရှိခဲ့တာ
အမှန်ပဲ၊မတရားမူကို ဆက်လက်မတော်လှန်ရင် အဖွဲ.ချုပ် ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာထက် အဖွဲ.ချုပ်ရဲ. နိဂုံးဖြစ်မှာပါပဲ၊၊
(၁၃) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်က ဦးအောင်ရွှေ၊ဦးတင်ဦး၊ဦးဝင်တင်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါဝင် အဖွဲ.၀င်အားလုံး
လာမည့် မတ်လ(၂၉)ရက်နေ.မှာ တညီတညွတ်တည်း စစ်အာဏာရှင်ရဲ. အောက်ကိုဒူးမထောက်ဘူးဆိုတာ ဖြစ်စေချင်
ပါတယ်၊အကယ်၍ ဒူးထောက်ခဲ့ရင်တော့ ပြည်သူတွေလဲ ရွ.ံမုန်း၊သံဃာတော်များကလည်း အဖွဲ.ချုပ်အား ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန
ကံတွေနဲ. အဆုံးသတ်ဖြစ်မှာပါ၊စစ်အစိုးရ ဥပဒေသည် သာသနာတော်ကိုဖျက်ဆီးရာရောက်တယ်၊ ထောင်ထဲက
သံဃာတော်များ စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ဆက်နေနိုင်အောင် မတရားတဲ့ဥပဒေကို NLD က လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုရင် (၂၉)
နေ.ကစပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်ကို ပြည်သူလူထုက ဆန်.ကျင်မူတွေ လုပ်လာမည်၊
(၁၄) ပြည်သူတွေနှင့် သံဃာတွေက NLD ကို ယုံကြည်မူမရှိတော့ရင် စစ်အစိုးရက သံဃာတွေနှင့် လူထုအပေါ် တောင်းပန်
၀န်ချပြီး နိုင်ငံရေးသမားပီပီ လူထုနှင့် သံဃာများအပေါ် ယုံကြည်မူ တည်ဆောက်ပြီး စစ်အစိုးရက သူတော်ကောင်းပုံစံ
(၁၅) အခုအနေထားက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာပြည်တခုလုံးက ယုံကြည်လေးစားတယ်၊ဆိုင်းဘုတ်နှင့် တံဆိပ်
တွေကို ပြည်သူက စိတ်မ၀င်စားသလို NLD ဆိုတာလဲ မသိ၊ လူထုသိတာက အောင်ဆန်းစုကြည်ပါပဲ၊ပြည်သူတွေက
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မုဒိတာပွားနိုင်ပါလျှက် ပါတီအတွင်းကလူတွေက ဒေါ်စုကို ဥပေက္ခာ ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်
NLD အသက်ဆုံးတဲ့နေ. ဖြစ်လိမ့်မယ်လို. ဆရာတော်က မေတ္တာရှေ.ရုပြီး ပြောလိုပါတယ်၊၊
Tell: 001 270 904 1142
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ လွှတ်တော်ဥပဒေ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ စသည်စသည် ဥပဒေများကိုလည်း စစ်အစိုးရက သူ့အစီ အစဉ်နဲ့သူ ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးခဲ့ပါပြီ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုတာကိုလည်း သူတို့က ဂုဏ်သရေရှိတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့သူတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူလူထုအများစုကြီးကတော့ စစ်အစိုးရကို အယုံအကြည်မရှိကြသလို သူတို့လုပ်မယ့် ရွေး ကောက်ပွဲဆိုတာကိုလည်း စိတ်ဝင်စားမှုမရှိကြပါပါဘူး။ စစ်အစိုးရနဲ့ပေါင်းဖို့ကလွဲလို့တခြားရွေးစရာမရှိတော့ဘူး။ ဒါနောက်ဆုံးရတားပဲ လို့ယုံကြည်ပြီး ရထားစီးဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ တတိယလမ်းသမားတွေကပဲ မထွက်သေးဘူးလား မထွက်သေးဘူးလားနဲ့ လည်တ ဆန့်ဆန့် ဖြစ်နေကြတာပါ။ ခုတော့စစ်အစိုးရရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေဆိုတာဘာ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင် ဥပဒေဆိုတာဘာ ဆိုတာ ကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့လိုက်ကြရပါပြီ။ ဘယ်သူတွေကမှတ်ပုံတင်ပြီး ဘယ်သူတွေကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြမှာပါလဲ။
တကယ်တန်းကတော့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်စစ်အစိုးရက အတင်းအဓမ္မ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင် စနစ် ထာဝရတည်မြဲရေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာအခြေခံထားတာပါ။ တပြားသားမှမလျှော့ပါဘူး။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သမတဦး စီးပြီး စစ်တပ်ကတိုက်ရိုက်ခန့်ထားတဲ့ စစ်သားအမတ် လေးပုံတပုံပါဝင်တဲ့ လွှတ်တော်ကြီးနဲ့ စစ်လက်ဝါးကြီးအုပ်အရင်းရှင် စစ်နိုင်ငံ တော်ကြီးတည်ဆောက်ဖို့ပါ။ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဥပဒေတွေအရ ၁၉၈၈ လူထုဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးကြောင့် ရရှိလာတဲ့ ပါတီစုံ ဒီ မိုကရေစီစနစ် အခြေခံ၊ လူ့အခွင့်အရေး ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေး လေးစားလိုက်နာရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တန်းတူအခွင့်အရေး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နဲ့ အရပ်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေး စတာတွေအားလုံးကို အပြီးအပြတ် ဖယ်ရှားပစ်လိုက် တာဖြစ်သလို ၁၉၉ဝ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေဒီ ရွေးကောက်ပွဲကြီးရဲ့ရလဒ်နဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒတွေအားလုံးကိုလည်း အပြီးအပြတ် ရှင်းလင်းပစ်လိုက်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအပါအဝင် မြန်မာပြည်သူလူထုတရပ် လုံးကို စစ်ကျွန်အဖြစ်ထာဝရ သွတ်သွင်းဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ တခြား ဒီ မိုကရေစီအမည်ခံပါတီတွေအနေနဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ရေရှည်ခြေလှမ်းတွေဟာ ဘာလဲ၊ မဟာဗျူဟာနည်းဗျူဟာတွေဟာ ဘာတွေလဲ။ ဆို တာကို အသေအချာဆန်းစစ်သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီမဆို အဓိကက ကိုယ့်ပြည်သူလူထုကို အလုပ်အကျွေး ပြုဖို့ပါ။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့၊ စားဝတ်နေရေး အခြေခံခိုင်မာတောင့်တင်းပြီး နိုင်ငံရေး စည်းပွားရေး လူမှုရေး လုံခြုံမှုအပြည့်အဝ ပေးနိုင်ဖို့၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး ဖွံဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတခုအဖြစ် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ တင့်တင့် တယ်တယ် ရပ်တည်နိုင်ဖို့အရေးကို ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉ဝ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ အနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ တခြား ဒီမိုကရေစီ အ မည်ခံပါတီတွေအနေနဲ့ စဉ်းစားရမှာက စစ်အစိုးရဟာ ဘယ်လိုအစိုးရမျိုးလည်း သူ့လုပ်ရပ်နဲ့ သူ့အပြောအရ သမိုင်းကြောင်းအရ ယုံ ကြည်စိတ်ချရရဲ့လား ကတိစကားတခုကိုတန်ဘိုးထားလေးစားလိုက်နာတတ်ရဲ့လား၊ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာရော တ ကယ် စေတနာရှိရဲ့လား ဆိုတာကို အသေအချာဝေဖန်အကဲခတ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ စစ်တပ်မဟုတ်တဲ့ ဘယ်အစိုးရအဖွဲ့ပဲ တက် လာတက်လာ ပြည်သူလူထုကတာဝန်ပေးစေခိုင်းတာကို တာဝန်ကျေကျေပွန်ပွန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့၊ ပြည်သူလူထုကြားမှာ တရားမျှတ မှု၊ လွတ်လပ်မှု ငြိမ်းချမ်းမှု စတဲ့တရားတွေ ရှင်သန်ဖွံဖြိုးဖို့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိဖို့ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင် တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခိုင်ခိုင်မာမာ တည်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပေးဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ ပြည်သူလူထုက ယုံကြည်အပ်နှံ ထားတဲ့ အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာဖို့ အဲဒီအာဏာနဲ့ ပြည်သူလူထုကိုပြန်ပြီးဖိစီးနှိပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာ အဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကို တိုင်းပြည်ကိုပေးအပ်နိုင်ပါ့မလား၊ အဲဒီလို တာဝန်မျိုးတွေကို တ ကယ်တန်းထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အစိုးရအဖွဲ့မျိုးကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါ့မလား။ ကြောင်းကျိုးတကျနဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိရှိ စဉ်းစားမယ်ဆို ရင် ကျနော်ကတော့ ဖြစ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ ရဲရဲတင်းတင်းပြောရဲပါတယ်။ စစ်အစိုးရဆိုတာကို ကျနော်တို့ ခုမှတွေ့ဖူးကြ တာမဟုတ်ပါဘူး။ ၅၈ ခုနှစ် ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့အိမ်စောင့်အစိုးရကိုထည့်မစဉ်းစားဘူးဆိုရင်တောင်မှ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကနေ ခု ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် တာ စစ်အစိုးရလက်အောက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
တခါအလိမ်ခံရရင် လိမ်သူရဲ့အပြစ် လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပေမယ့် အကြိမ်ကြိမ်အလိမ်ခံရရင်တော့ အလိမ်ခံတဲ့သူတွေမှာလည်း တာဝန်တစုံ တရာရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံပါတီ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာသာ တာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူလူထုအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အားလုံးက လက်မခံ ဆန့်ကျင် ငြင်းဆန် ကြမယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုအာဏာရှင်မျိုးမှ တိုင်းပြည်တခုကိုရေရှည်အုပ်ချုပ် ကျွန်ပြုလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာ သမိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာအထင်အရှား ရှိနှင့်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ဖယ်ရှားပစ်ရေးအတွက် အကြမ်းမဖက်အာခံဆန့်ကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြမ်းဖက် အာခံဆန့်ကျင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုလို့ရနိုင်သမျှ တော်လှန်ရေးနည်းနာတွေကို ကျနော်တို့ အသုံးပြုရမယ့်အချိန်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
အဓမ္မဟာ ယာယီအနိုင်ရနေပေမယ့် ဓမ္မကို ထာဝရ အနိုင်မရနိုင်ပါဘူး။ မကြာတော့တဲ့ တနေ့မှာ ဓမ္မဟာ အဓမ္မကို မလွှဲမသွေအနိုင်ရ ရမှာ အသေအချာပါပဲ။ ယုံကြည်ပါ အမှန်တရား….။ ။
Photo by: http://sittnyeinaye.blogspot.com
၂၅/ မတ် ၂၀၁၀
မျှော်လင့်တုန်း ကြော့ဆုံး ရောက်လာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ “တောင့်တတုန်းအခါ ပေါ်ထွက်လာ သတ္တ၀ါဓလေ့ စိတ်ချမ်းမြေ့” ဆိုတဲ့ သံပေါက်နဲ့ တင်စားဖို့ကတော့ ‘ဝေးစွခြောက်ပါး’ ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူအားလုံး စိတ်မချမ်းမြေ့စွာ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရတဲ့ ကပ်ဘေးဆိုးကြီးဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ အမှန်တကယ်ကိုပဲ ကျရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေ ဦးဆောင်တဲ့ အတ္တ၀ါဒီ အာဏာရှင်စစ်ဗိုလ်တစုဟာ ပဲ့ကိုင်နေရာ သူတို့အဓမ္မတက်ယူထားတဲ့ သင်္ဘောကြီးကို ဧရာမ ကျောက်ဆောင်ကြီးနဲ့ ၀င်ဆောင့်ပစ်လိုက်ကြပါပြီ။
မြန်မာပြည်သူလူထု အများစုကြီးရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ မျှော်မှန်းချက်များ ထင်ဟပ်နေတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ပါ တောင်းဆိုချက်များအပြင် ဒီပဲယင်းလူသတ်ပွဲကြီး အပါအ၀င် န၀တ/နအဖတို့ရဲ့ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှ အားလုံးကို သင်ပုန်းချေပြီး နိုင်ငံ့အကျိုးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါရစေဆိုတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရိုကျိုးနှိမ့်ချတဲ့ တောင်းဆိုချက်ကိုပါ လုံးဝဥပက္ခာပြု လျစ်လျူရှုပြီး ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေကို တဖက်သတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်ခြင်းဖြင့် နအဖဟာ မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးနဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကို အပြီးသတ် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း စိန်ခေါ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းပြောရရင် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြော်အမြင်ကြီးမားစွာ ချပြခဲ့တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ အလုံးစုံပျက်သုဉ်းရေး လမ်းနှစ်လမ်းအနက် နအဖက ဒုတိယလမ်းကို ရွေးချယ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
လုံးလုံးလျားလျား မျှော်လင့်မထားတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် နအဖရဲ့ အဲဒီလုပ်ရပ်ဟာ မြန်မာနဲ့ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေကို အလွန်အမင်း အံ့အားသင့်သွားစေခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နှိုင်းယှဉ်ကြရမယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်က မလုပ်ဖို့ အတန်တန် မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းပန်နေတဲ့ကြားက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် အလီဘူတိုကို အာဏာသိမ်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဇီယာအူလ်ဟတ်က ကြိုးပေးကွပ်မျက်လိုက်တဲ့အခါ၊ နိုက်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာသိ ပြဇာတ်ရေးဆရာတဦး အပါအ၀င် အတိုက်အခံ (၁၀) ဦးကို အာဏာသိမ်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဆန်နီအဘာချာက ကွပ်မျက်စီရင်လိုက်တဲ့အခါ၊ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေ ခံစားခဲ့ကြရတဲ့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုမျိုးနဲ့ ဒီကနေ့ ဗမာစစ်အာဏာရှင်တစုရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေ ခံစားရတဲ့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှု ဆင်တူနေမှာ သေချာပါတယ်။
နအဖရဲ့ ကြေညာချက်တွေနဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေမှာ အဲဒီခံစားချက်ကို မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မှတ်သားစရာကောင်းတာတခုက ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဇီယာအူလ်ဟတ်ရော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆန်နီအဘာချာပါ သက်တမ်းစေ့မနေရဘဲ သေဆုံးသွားခဲ့ကြရတဲ့အဖြစ်ပါ။ ပါကစ္စတန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက လေယာဉ်ပေါက်ကွဲပျက်ကျမှုတခုမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး နိုက်ဂျီးရီးယား ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကတော့ နှလုံးရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက် သေဆုံးသွားတယ်လို့ သူ့နိုင်ငံက သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာပဲပြောပြော နအဖကတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘဲ မျက်ကန်းတစ္ဆေမကြောက် သူလုပ်စရာရှိတာကို လုပ်လိုက်ပါပြီ။ အဲဒီတော့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို လူသားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်မှုအတွက် အရေးအပါဆုံးသော အင်္ဂါရပ်များအဖြစ် သဘောထားကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူများနဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း စိတ်မချမ်းမြေ့မှုများ၊ ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုများနဲ့ မကျေနပ်မှုများကို ခွန်အားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ပြီး ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်ကြရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘောလုံးကတော့ ကွင်းရဲ့ကိုယ့်ဘက်အခြမ်းကို နောက်တကြိမ် ရောက်လာပြန်ပြီလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ နောက်တကြိမ်လို့ ပြောရတာက ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး စတင်ခဲ့ချိန်ကစလို့ အခုအထိ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော်ကာလအတွင်း ဘောလုံးဟာ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့ ကွင်းဘက်အခြမ်းကို အကြိမ်ကြိမ် ရောက်လာခဲ့ဖူးပြီးဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအကြိမ်က အရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ အရှိန်အဟုန် အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ကိုယ့်ခြေထဲရောက်နေတဲ့ ဘောလုံးကို ဂိုးအဖြစ် အချိန်မီ မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် စစ်အာဏာရှင်တွေက စက်တင်ဘာ (၁၈) အာဏာသိမ်းပွဲနဲ့ ဘောလုံးကို လုယူသွားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒုတိယတကြိမ်က အရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလမှာ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်အစိုးရ တောင်းဆိုချက်ကို ဆက်လက်ကိုင်စွဲမလား ဒါမှမဟုတ် န၀တ ချပေးတဲ့ ပါတီတွေ ဖွဲ့စည်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးလမ်းကြောင်းကို လိုက်မလားဆိုတဲ့ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုအနက် တခုကို ရွေးချယ်ဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကလည်း လူထုလှုပ်ရှားမှုခေါင်းဆောင်တွေဟာ န၀တလမ်းကြောင်းအတိုင်း လိုက်ပါလျှောက်လှမ်းဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ကြခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ခြေထဲက ဘောလုံးကို ဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ န၀တ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ကွင်းဘက်အခြမ်းကို ရောက်သွားစေခဲ့ပြန်ပါတယ်။
တတိယအကြိမ်က ဂန္ဓီခန်းမညီလာခံပါ။ ဒီအချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော် အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အန်အယ်လ်ဒီဟာ လူထုခေါင်းဆောင် လူထုတပ်ဦးပါတီ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပထမဆုံးကျင်းပတဲ့၊ အဲဒီပါတီက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး တက်ရောက်တဲ့ ဂန္ဓီခန်းမညီလာခံဟာ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ သိပ်ကိုအရေးပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီညီလာခံမှာလည်း လူထုခေါင်းဆောင်တွေဟာ ကိုယ့်ခြေထဲမှာရှိနေတဲ့ ဘောလုံးကို ဂိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် ဘောလုံးဟာ န၀တ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ကွင်းဘက်အခြမ်းကို ပြန်ရောက်သွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
အဲဒီအကြိမ်နဲ့ မရှေးမနှောင်း လူထုခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ကွင်းဘက်အခြမ်းကို စတုတ္ထအကြိမ် ဘောလုံးရောက်လာပြန်တဲ့ အဖြစ်အပျက်က ဂန္ဓီခန်းမညီလာခံမှာ အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေ တစုံတရာကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရဲရဲရင့်ရင့် ဆုံးဖြတ်ကြေညာလိုက်မှာကို အကြောက်ကြီးကြောက်သွားတဲ့ န၀တ ကမူးရှူးထိုးရေးပြီး ကသောကမြော ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ (၁/၉၀) ကြေညာချက်ကို အတင်းအဓမ္မ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတကြိမ်မှာလည်း အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ကိုယ့်ဘက်အခြမ်းရောက်လာတဲ့ ဘောလုံးကို ဖြုန်းတီးပစ်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။
ပဉ္စမအကြိမ်က ဦးတင်ဦးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အတက်ကြွဆုံး လှုပ်ရှားနေသူတွေကို နအဖက ပါတီထဲက ထုတ်ခိုင်းတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပြီး ဆဋ္ဌမအကြိမ်က နအဖရဲ့ အမျိုးသားညီလာခံတက်မလား၊ မတက်ဘူးလား ဆိုတာကို ရွေးချယ်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်ကြိမ်စလုံးမှာလည်း အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေဟာ ကိုယ့်ကွင်းဘက်အခြမ်း ရောက်လာတဲ့ ဘောလုံးတွေကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးမချနိုင်ဘဲ နအဖ ခြေထောက်ထဲကိုပဲ ပြန်ကန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၅ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အန်အယ်လ်ဒီဟာ ဒေါ်စုအပါအ၀င် ခေါင်းဆောင် (၃) ဦးကို ပါတီထဲပြန်ထည့်ခြင်း၊ နအဖ အမျိုးသားညီလာခံက နုတ်ထွက်ခြင်းတို့ဖြင့် မိမိရဲ့ကစားကွက်အမှားကို စတင်ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ အမျိုးသားညီလာခံကို ပြန်တက်မလား၊ မတက်ဘူးလားဆိုတဲ့ လမ်းဆုံလမ်းခွနဲ့အတူ ဘောလုံးကိုယ့်ကွင်းဘက် အခြမ်း ရောက်လာပြန်တဲ့အခါမှာတော့ အန်အယ်လ်ဒီဟာ ကစားကွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကစားပြီး နအဖကို အကျပ်အတည်း ကောင်းကောင်း ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီပေးတဲ့ အဲဒီအကျပ်အတည်းကြောင့်ပဲ နောက်ပိုင်းမှာ နအဖဟာ သူ့ရဲ့ မူလဗီဇ ဘီလူးရုပ်ကို လုံခြုံအောင် ဖုံးအုပ်ထားနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲ ဆက်ကာဆက်ကာ ဖွင့်လှစ်ဖော်ထုတ် ပြသလာခဲ့ရတော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတကြိမ် အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ ကွင်းဘက်အခြမ်းကို ဘောလုံးပြန်ရောက်လာတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အန်အယ်လ်ဒီရော၊ နအဖရော၊ မြန်မာပြည်သူတွေရော၊ နိုင်ငံတကာရော အားလုံး အသေအချာ သိထားကြဖွယ်ရှိတဲ့ အချက်ကတော့ ဒါဟာ နောက်ဆုံးအကြိမ် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ကို လုံးဝဂရုမစိုက်တဲ့ ပုံဖမ်းပြီး နအဖက ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေကို တဖက်သတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းတလျှောက် ပြည်သူတွေ ဘ၀တွေ အသက်တွေ အဆင့်ဆင့် စတေးပေးဆပ် ရုန်းကန်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့ကြရပြီး ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ အထွတ်အထိပ် ရောက်သွားခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေ၊ အာသီသတွေ၊ မျှော်မှန်းချက်တွေ ထည့်ထားတဲ့ ခေါင်းတလားအဖုံးရဲ့ နောက်ဆုံးသံချက်ကို ရိုက်သွင်းဖို့ စစ်အာဏာရှင်တွေက အသေအချာ နေရာယူပြင်ဆင်လိုက်တာဖြစ်လို့ပါပဲ။
ဗိုလ်မောင်မောင်၊ ဗိုလ်နေ၀င်းတို့ မွေးဖွားပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ နွားအိုနောက်ကျသား နအဖစစ်အုပ်စုဟာ သူတို့ဆယ်စုနှစ်ခုကြာ ညတိုင်းမက်လာခဲ့ရတဲ့ တရားဝင်မှု Legitimacy အိပ်မက်ဆိုးကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ ပယောဂကုထုံး အသုံးပြုပြီး အပြီးတိုင် ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် အခြေအနေကတော့ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ပြည်သူတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ ပြန်မဆုံနိုင်တော့မယ့်လမ်းကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချက်ဟာ လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ရှားနေပါပြီ။
အဲဒီတော့ မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ တပ်ဦးမှာရှိနေတဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီအနေနဲ့လည်း ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကို ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်။ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးအတွင်းက ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အရေးတော်ပုံပါတီတရပ်အတွက် အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ရွေးစရာလမ်းနှစ်သွယ် မရှိအပ်တော့ပါဘူး။ လျှောက်စရာ တလမ်းပဲ ရှိတော့တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။ နအဖရဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထဲမှာ ပါတီတရပ်အဖြစ် တည်ရှိလိုတယ်ဆိုရင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်လို့ ပါပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်နဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေတာကြောင့် ဒီအချက်တခုတည်းနဲ့တင် အန်အယ်လ်ဒီဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ပတ်သက်မှုမပြုရေး ဆုံးဖြတ်ဖို့ လုံလောက်နေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် နအဖက ဒါနဲ့တင် အားမရသေးပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလို့ ထောင်ဒဏ်ကျခံနေကြရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် သူရဲကောင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုပါ ပါတီထဲက ထုတ်ပစ်မှ ပါတီဆက်လက်ရပ်တည် ရှင်သန်ခွင့်ရှိမယ်လို့ နိုင့်ထက်စီးနင်း ပြောဆိုထားပါသေးတယ်။ ဒီဖော်ပြချက်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုအစစ်အမှန်က ဘာလဲ။ အန်အယ်လ်ဒီကို သူ့လက်ထဲက ဒီမိုကရေစီရေး၊ တန်းတူရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအလံတော်များကို လွှင့်ပစ်ခိုင်းရုံတင်မက ဒူးထောက်ပြီး သူတို့ရဲ့ စစ်ဖိနပ်ကိုပါ လျှာနဲ့ ကုန်းလျက်ဖို့ စစ်အာဏာရှင်တွေက အမိန့်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကာအရံ အဆင်တန်ဆာတွေ ဖယ်ပြီးကြည့်ရင် အဲဒီပကတိအရှိတရားကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ထင်ထင်ရှားရှာ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် စူးရှတဲ့ အမှန်တရားတခုကတော့ အတိတ်ဖြစ်ရပ်တွေအရ တကယ်လို့ အန်အယ်လ်ဒီက အဲဒီအတိုင်း လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် နအဖရဲ့လုပ်ရပ်က အဲဒီလောက်မှာတင် ရပ်တန့်ပြီးဆုံးသွားခြင်းမရှိမှာ သေချာနေတဲ့ အချက်ပါပဲ။ မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အဘိဓာန်ထဲမှာ Fair Play ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရမရှိပါဘူး။ ‘စစ်သုံ့ပန်းမလိုချင်ဘူး’ ဆိုတဲ့ မြန်မာစစ်ဗိုလ်တချို့က အောက်ခြေအဆင့်ဆင့်ကို တရားမ၀င်ပေးထားတဲ့ သဘောထားတခုကိုကြည့်ရင် မြန်မာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ သဘာဝကို သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေဘက်က ကြည့်ရင်တော့ အန်အယ်လ်ဒီဟာ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ချိန်ကစပြီး အခုအချိန်အထိ ခြုံပြောရရင် ပြည်သူတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဦးဆောင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးရဲ့ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်ကာလ သုံးပါးစလုံးအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ အန်အယ်လ်ဒီဟာ မြန်မာပြည်သူတွေကို ဆက်လက်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် ဦးဆောင်သွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။
ရှေ့မှာ အန်အယ်လ်ဒီဟာ ဘောလုံး ကိုယ့်ကွင်းဘက်အခြမ်း အကြိမ်ကြိမ်ရောက်ခဲ့ပြီး အကြိမ်အတော်များများမှာ အကျိုးရှိအောင် အသုံးမချနိုင်ခဲ့တာကို ပြည်သူတွေက ချင့်တွက်ဖြည့်တွေးပြီး နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မထောက်မညှာတမ်း ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ ဦးဆောင်မှုအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး (အထူးသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်နိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာ) မြန်မာပြည်သူတွေကြား မကြေလည်တာတွေ၊ အားမလိုအားမရဖြစ်တာတွေ၊ အားကိုးအားထားပြုချင်စိတ် လျော့ပါးတာတွေ ရှိခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း အန်အယ်လ်ဒီကို မလေးစား ရိုသေမှုမရှိလို့ နအဖက အခုလို ထင်တိုင်းကြဲနေတာဖြစ်တယ်။ အန်အယ်လ်ဒီကလည်း နအဖ လေးစားရိုသေ ခန့်ညားအောင်လုပ်ပြနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမရှိတဲ့ ပါတီဖြစ်တယ်။ အန်အယ်လ်ဒီဟာ နိုင်ငံရေးပါတီတခုထက် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေရဲ့ ဆွံ့အနားမကြားကျောင်းတခုနဲ့ ပိုပြီးတူနေပြီ …. စတဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေမှာ အနည်းဆုံး အမှန်တချို့တော့ ပါဝင်နေတယ်လို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ယူဆခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ အဲဒီခံစားချက်တွေဟာ အတန်အသင့် သဘာဝကျပြီး တစုံတခုသော အတိုင်းအတာအထိ ကြောင်းကျိုးဆီလျော် ခဲ့တယ်ဆိုရင် အန်အယ်လ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေအတွက် မိမိတို့ရဲ့ ချွတ်ယွင်းအားနည်းချက်များကို ပြင်ဆင်ဖို့နဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေက မိမိတို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြောင်း ပြသဖို့ အခုအချိန်ဟာ အကောင်းဆုံးအချိန်၊ အခုအခွင့်အလမ်းဟာ အကောင်းဆုံး အခွင့်အလမ်းပါပဲ။
ဒီအခွင့်အလမ်းကို အမိအရ ဖမ်းဆုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အန်အယ်လ်ဒီမှာ လမ်းညွှန်မူအဖြစ် ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ရှိနေပါပြီ။ ဒီကြေညာချက်ပါ လမ်းညွှန်အခြေခံမူများကို ပြတ်ပြတ်သားသား ကိုင်စွဲပြီး ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိ ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ဦးလည်မသုန် ဦးဆောင်ချီတက်သွားနိုင်ရေး မျှော်မှန်းဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ဖို့ သေချာသလောက်ရှိတဲ့ တိုးချဲ့ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နဲ့ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့တို့လည်း စုံစုံညီညီရှိနေပါပြီ။
ရှေ့အဖို့မှာ မတရားသဖြင့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဦးဆောင်မှုကို ရမရဆိုတာကတော့ အန်အယ်လ်ဒီအတွက် မသေချာပါဘူး။ လက်ရှိအခြေအနေ အရပ်ရပ်အရ မရဖို့ များပါတယ်။ လာမယ့် တိုက်ပွဲမှာလည်း သမိုင်းတလျှောက် ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်နိုင်ရင် ပိုကောင်းမှာဖြစ်ပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် လူထုရှေ့ကရပ်ပြီး ဦးမဆောင်နိုင်ရင်လည်း အလုပ်မလုပ်နိုင်လောက်အောင်တော့ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူတွေ ဘာကိုပြသခဲ့ကြသလဲ။ အဲဒါဟာ အန်အယ်လ်ဒီအတွက် လမ်းညွှန်အခြေခံမူပါပဲ။ လတ်တလောအခြေအနေမှာ အဲဒါကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာချက်ဟာ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ လမ်းညွှန်အခြေခံမူပါပဲ။ နောက်ပြီး ၁၉၈၈ ကစလို့ အခုအထိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်လိုပြောဆိုပြုမူ ရပ်တည်ရှင်သန်ခဲ့သလဲ။ အဲဒါဟာ အန်အယ်လ်ဒီအတွက် အခြေခံမူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတလွှား နိုင်ငံအတော်များများမှာ ပြည်သူ့အာဏာလှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာမှာ နိုင်ငံအားလုံးလိုလိုက လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ မြန်မာပြည်က လှုပ်ရှားမှုလောက် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခြင်းမရှိ၊ ရှည်ကြာခြင်းမရှိဘဲ အဆုံးအဖြတ် အောင်ပွဲတွေ ရရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေကတော့ အခုအထိ ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ ဆက်လက်ရုန်းကန် တိုက်ပွဲဝင်နေကြရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါဘာကြောင့်လဲ။ မြန်မာပြည်က စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတဲ့ တောင်ဟာ အနိုင်နိုင်ငံက တောင်တွေထက် ပိုမတ်စောက်ပြီး ပိုမြင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ဟာ အနိုင်နိုင်ငံက ပင်လယ်တွေထက် ပိုကျယ်ပြီး လှိုင်းပိုကြမ်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို သဘောပေါက်ကြရပါလိမ့်မယ်။ တချိန်တည်းမှာ ဘယ်လောက်မြင့်တဲ့ တောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်မှာ လူသားရဲ့ခြေဖ၀ါးအောက် ရောက်ရစမြဲဖြစ်တယ်။ ဘယ်လောက်ကြမ်းတမ်းတဲ့ လှိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်မှာ လူသားရဲ့ လှေအောက် ရောက်ရစမြဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုလည်း သဘောပေါက်ကြရပါလိမ့်မယ်။
အခုအချိန်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သိပ်ကို အရေးကြီးနေပါပြီ။ နိုင်ငံသမိုင်းတလျှောက် ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ သွေး ချွေး မျက်ရည်တွေအတွက်၊ အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေအတွက်၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တန်းတူရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် မြတ်နိုးလေးစား တန်ဖိုးထားကြတဲ့ ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေအတွက်၊ ခြုံပြောရရင် ယဉ်ကျေးတဲ့ လူသားမျိုးနွယ်တရပ်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် သိပ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကနေ့ အန်အယ်လ်ဒီ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပခုံးပေါ်မှာကျရောက်နေတဲ့ တာဝန်ရဲ့ပမာဏကို မှန်းဆကြည့်ပြီး စာနာစိတ်ပေါ်ပေါက်ကြမှာဖြစ်သလို အဲဒီတာဝန်ကြီးကို ထမ်းဆောင်အောင်မြင်ခဲ့ရင် ရရှိမယ့် ဂုဏ်ဒြပ်ရဲ့ ကြီးမြတ်ခမ်းနားမှုကို မှန်းဆကြည့်ပြီးတော့လည်း အားကျစိတ် ပေါ်ပေါက်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ လူထုကိုဦးဆောင်မှုပေးရတော့မယ့် တပ်ဦးပါတီတရပ်ရဲ့ ညီညွတ်ရေးဟာ ကျောက်သားကျောက်စိုင်လို ခိုင်မာနေဖို့ပါပဲ။ မြို့နယ်ပါတီရုံးတွေ ပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးတာမျိုးနဲ့ ရုပ်သေးကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့တာမျုိးတွေ အပါအ၀င် လာလတ္တံ့သော နအဖရဲ့ အပေါစား မျက်လှည့်ပြကွက်မျိုးတွေမှာ စိတ်ဝမ်းမကွဲကြဘဲ ကိုယ်လျှောက်ရမယ့် ရှေ့ခရီးကို မျက်ခြည်မပြတ်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
အရေးကြုံရင် သက်လုံကောင်းပြီး အရေးကြီးတဲ့ အလှည့်အပြောင်း အကွေ့အချိုး အခိုက်အတန့်တိုင်းမှာ သွေးစည်းညီညွတ် စည်းကမ်းသေ၀ပ်စွာ၊ ရဲရင့်ပြတ်သား ခိုင်မတ်တက်ကြွစွာ တိုက်ပွဲဝင်နိုင်စွမ်းရှိသူများဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းတလျှောက် အကြိမ်ကြိမ် သက်သေပြခဲ့ကြပြီးဖြစ်တဲ့ မြန်မာပြည်သူများဘက်ကတော့ အမြဲတမ်း အဆင့်သင့်ပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ သူတို့အလိုအပ်ဆုံး အရာဟာ ငွေလည်းမဟုတ်၊ လက်နက်လည်းမဟုတ်၊ နိုင်ငံခြားစစ်တပ်လည်းမဟုတ်၊ ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းရေးတပ်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့တပ်ဦးပါတီ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့ မှန်ကန်ခိုင်မာ ရဲဝံ့ပြတ်သားတဲ့ ဦးဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် အန်အယ်လ်ဒီဟာ ဒီလ (၁၅) ရက်နေ့ ကျင်းပတဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အစည်းအဝေးမှာ နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောထားအမြင်ကို ယေဘုယျချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး (၂၉) ရက်နေ့ ပြုလုပ်မယ့် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ စုံညီအစည်းအဝေးမှာ အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ဖို့ သဘောတူထားကြပြီမို့ အဲဒီနေ့မှာ ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ဆန္ဒကို ထင်ဟပ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ နအဖရဲ့ ဆန္ဒတို့ဟာ ပြဒါးတလမ်း၊ သံတလမ်း ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေကြတာမို့ အန်အယ်လ်ဒီက ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ထင်ဟပ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်လိုက်ပြီးနောက် မကြာခင်မှာ နအဖဟာ ထုံးစံအတိုင်း လက်နက်အားကိုးပြီး အန်အယ်လ်ဒီအပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီအင်အားစု ခေါင်းဆောင်တွေကို နှိပ်ကွပ်ချေမှုန်းပါလိမ့်မယ်။ အန်အယ်လ်ဒီပါတီအပါအ၀င် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား ပါတီတွေဟာလည်း နအဖရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ တရားဝင်ပါတီအဖြစ်က ရပ်ဆိုင်းသွားကောင်း သွားနိုင်ကြဖွယ်ရှိပါတယ်။ ပြည်သူကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဦးဆောင်မှုပေးခဲ့တဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တွေဟာလည်း အကျဉ်းထောင်တွေထဲ ရောက်သွားကောင်းသွားနိုင်ကြပါတယ်။ ခြုံပြောရရင် ဒီတိုက်ပွဲမှာ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေဟာ (သာမန်အားဖြင့် အများနားလည်ထားကြတဲ့ စံသတ်မှတ်ချက်တခုအရ) ရှုံးနိမ့်ကောင်း ရှုံးနိမ့်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ပညာရှိတဦးရဲ့ အဆိုအမိန့်တခုက မှတ်သားစရာပါ။ သူက “အနိုင်ခံလိုက်ရခြင်းဟာ ယာယီအခြေအနေတရပ်သာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒါကို ထာဝရအခြေအနေတရပ်ဖြစ်သွားအောင် ပြုလုပ်တဲ့အရာကတော့ လက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီတကြိမ်မှာ အနိုင်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တောင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဘက်က အရှုံးမပေးသမျှ ကာလပတ်လုံး ဘယ်တော့မှ မရှုံးပါဘူး။ ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မအကြား ဆင်နွှဲတဲ့ စစ်ပွဲမှာ အဓမ္မက အပြီးသတ် အောင်ပွဲဆင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ၊ ပြည်သူနဲ့ အာဏာရှင်စနစ်အကြား ဆင်နွှဲတဲ့စစ်ပွဲမှာ အာဏာရှင်စနစ်က အပြီးသတ် အောင်ပွဲဆင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်ဒေသ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ခေတ် ဘယ်ကာလမှာမှ မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ထုံးစံလည်းမရှိပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဒီတပွဲမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဘက်က အသာစီးရသွားတယ်ဆိုရင်တောင် ဒီပွဲဟာ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံခရီးမှာ အချည်းနှီးဖြစ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၈၈ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးထဲက ပေါက်ဖွားလာခဲ့ပြီး မတရားမှုကို ဆန့်ကျင်အန်တုရာမှာ စံပြဖြစ်တဲ့ ခွပ်ဒေါင်းပုံရိပ်ကို အလံမှာ ထည့်သွင်းရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ ပါတီတခုဟာ သမိုင်းတကွေ့မှာ ပြည်သူတွေ အပ်နှင်းထားတဲ့ တာဝန်ကို အပြောင်မြောက်ဆုံး ဦးလည်မသုန် ထမ်းဆောင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းက ဓူဝံကြယ်သဖွယ် ကောင်းကင်မှာ ထာဝရတည်ရှိနေပြီး တော်လှန်တဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက်တွေကို လမ်းညွှန်မှုပေးနေမှာ အသေအချာဖြစ်ပါတယ်။ ။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး၊ Force - ၁၃၆ … ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ကြေးနန်းနှစ်စောင်
မင်းဟန် | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မတ်လ ၂၄ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၅၁ မိနစ်
ပထမတွင် ….ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီးအား မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက သတ်မှတ်ထား၏။
သို့သော်…. အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်များအား ခုခံတိုက်ခိုက်ရန်၊ ဂျပန်စစ်ဌာနချုပ်က ဗမာ့တပ်မတော်ကို၊ ‘စစ်အမိန့်’ ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သည့်အတွက် …ပထမ သတ်မှတ်ထားခဲ့သောရက်အား ပြင်ဆင်ခဲ့ကြရသည်။ မတ်လ ၂၅ ရက်မှ…. ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့သို့ ပြောင်းလဲလိုက်၏။
တော်လှန်မည့်နေ့ ‘ဒီ ဒေး’ အပြောင်းအလဲရှိသကဲ့သို့ …စစ်တိုင်း ၁ ၏ စစ်ရေးခေါင်းဆောင်နှင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် အပြောင်းအလဲများလည်း ရှိ၏။
မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင်မူ ….. တပ်မတော်နှင့် တော်လှန်ရေးအား ဆန့်ကျင်ပြီး ဂျပန်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလိုသည့် ဗိုလ်မှူးရန်နိုင် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်၊ ဒေါက်တာ ဘမော်၏ သားမက်) ၏ သတင်းပေးမှုကြောင့် ဂျပန်စစ်ဘက်ဌာနက သိရှိသွားပြီး တပ်မတော်၏ လှုပ်ရှားမှုများအား အရေးယူစုံစမ်းလာ၏။ ပဲခူးရှိ တိုင်း ၄ တွင် လက်နက်များသိမ်းယူမည်အထိ အခြေစိုက်လာ၏။ ဤတွင် ….. တပ်မတော်အနေနှင့် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအား လက်ဦးမှုရယူနိုင်ရန်အတွက် …. တော်လှန်ရေးစတင်မည့် ရက်နှင့် အချိန်အား အရေးပေါ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ရ၏။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီး စတင်မည့် နေ့ရက်…
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဗဟိုစစ်ဦးစီးဌာနချုပ်အား ကံမမြို့နယ် ပုဏ္ဍားရွာတွင် အခြေစိုက်ထားပြီး၊ ဗိုလ်မှူးအောင်၏ တိုင်း ၇ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က …. မင်းတုန်းမြို့နယ် ကစွန်းမြောင်ရွာအနီးရှိ လယ်တဲငယ်တခုတွင် ယာယီအခြေပြုထားသည်။ ပုဏ္ဍားရွာနှင့် ကစွန်းမြောင်ရွာများက ခြေလျင်ခရီးနှင့် ၄ မိုင် ခရီးမျှသာဝေး၏။
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး မစတင်မီကတည်းမှပင် ဆင်းမလားရောက် ဗြိတိသျှများနှင့် ဖဆပလ သည် အဆက်အသွယ် ရရှိထားခဲ့၏။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် အိန္ဒိယရှိ သခင်သိန်းဖေ (စာရေးဆရာ သိန်းဖေမြင့်) ၏ အဆက်အသွယ်ဖြင့် ဖဆပလ နှင့် Force - ၁၃၆ အကြား စစ်ရေးအရ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်မှု ရှိနေ၏။ ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေး တပ်သားများအား Force - ၁၃၆ မှ လေထီးနှင့် ဖက်ဆက်တော်လှန်ရေး စစ်တိုင်းကြီးများတွင် ချပေး၏။ စစ်တိုင်းများအားလုံးတွင်မူ မဟုတ်…။ ဗိုလ်မှူးအောင်၏ တိုင်း ၇ တွင် ရှိ၏။ သခင်သန်းထွန်း၊ ကိုဗဟိန်းတို့ အခြေပြုထားသည့် ပဲခူးရိုးမအရှေ့ခြမ်းတွင် ရှိ၏။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ တိုင်း ၂ တွင် ရှိ၏။ တိုင်း ၂ တွင်က …. သခင်စိုးနှင့် ဗိုလ်မှူးကြီးနေဝင်းတို့ တာဝန်ယူကြ၏။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးစီးသည့် ဗဟိုစစ်ဦးစီးဌာနချုပ်တွင်က မရှိ….။ တိုင်း ၇ နှင့်တွဲ၍ သုံးရသည်။
မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့၊ နံနက်မှာပင် ဗိုလ်ချုပ်တို့ တိုင်း ၇ စစ်ဌာနချုပ်ရှိရာ မင်းတုန်းမြို့နယ်၊ ကစွန်းမြောင်ရွာအနီးရှိ လယ်တဲတခုသို့ ရောက်ရှိလာကြ၏။ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်အတူ…. ဗိုလ်မှူးမင်းခေါင် (ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်) ဗိုလ်မှူးထွန်းအုံ (မြူနီစပယ်မင်းကြီး၊ အငြိမ်းစား)၊ ဗိုလ်မှူးစမိုက် (ဗိုလ်မှူးကြီး လှအောင်) ၊ ဗိုလ်မှူးဖိုးကွန်း (ပြည်သူ့ရဲဘော်၊ အငြိမ်းစား၊ ဆိုဗီယက်သံအမတ်ကြီး) တို့လည်း လိုက်ပါလာကြသည်။
Force - ၁၃၆ က (ဖဆပလ) အား ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးတွင် သူတို့၏ ပြောက်ကျားတပ်၊ သတင်းပေးအဆင့်နှင့်သာ ဆက်ဆံချင်၏။ ဖက်ဆစ်ဝင်ရိုးတန်း အင်အားစုအား စစ်ရေးအရ မဟာမိတ်ပြု၍၊ တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ပြည်သူ့တပ်မတော်အဖြစ် (ဖဆပလ) အပေါ် သဘောမထားလို..။ ပြီးလျှင် … လေထီးနှင့် ချပေးထားသည့်၊ ကြိုးမဲ့ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေး စက်များကိုလည်း Force - ၁၃၆ နှင့်သာ ဆက်သွယ်ရမည်။ အခြားစစ်တိုင်းများနှင့် အချင်းချင်း မဆက်သွယ်ရဟူ၍ ကန့်သတ်ထား၏။ လက်နက်နှင့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များအား ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးအတွက် လေထီးနှင့် ချပေးမည့် အစီအစဉ်ကိုလည်း ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကြီး စတင်သည့် အချိန်အထိ မချသေး…။ ဤတွင် … တိုင်း ၇ ၏ ဒုတိယစစ်ရေးခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးစိန်မှန် ပေါက်ကွဲလေ၏။ မဟာမိတ်တပ်မျာအား ‘ငါ ’ နှင့် ကိုင်တုတ်ဖူး၏။
ဗိုလ်ချုပ်သည် ကြေးနန်းစာအား အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဖတ်၏။ ပြီးလျှင် …. အနီးတွင် ထိုင်နေသည့် ဗိုလ်မှူးစိန်မှန်အား…။
ဗိုလ်မှူးစိန်မှန်သည် ကြေးနန်းစာ၏ ပထမတကြောင်းအား ဖတ်ပြီး… ဆက်၍ မဖတ်။ ရပ်လိုက်၏။ ပြီးလျှင် …. ဒေါသနှင့် …။
အားလုံးက … Force - ၁၃၆ ၏ ကြေးနန်းတွင် ရေးထားသည့် ပထမဆုံးစာကြောင်းကြောင့်၊ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်၍ နေကြ၏။ မကျေနပ်ကြ…။
ကြေးနန်းက ဤတွင် ဆုံးပြီ….၊ အားလုံး၏ ရင်အတွင်းမှ ဒေါသမီးအပူက … တပေါင်းနွေနှင့် အပြိုင်…။ ဗိုလ်ချုပ်သည် သူ၏ တပ်မှူးများအား ဝေ့၍ကြည့်ပြီး…. တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နှင့်ပင် စကားအား ဆို၏။
ဗိုလ်ချုပ်၏ စကားဆုံးသည်နှင့် တဲအတွင်း၌ ခဏငယ်မျှ တိတ်ဆိတ်၍သွား၏။ ဗိုလ်ချုပ်သည် ‘ဟန်းကော’ အတွင်းမှ ရေနွေးကြမ်းပူပူအား ငှဲ့၍ သောက်၏။ ပြီးလျှင် …. စာရွက်လွတ်တရွက်ပေါ်၌ ကြေးနန်းစာအား ချ၍ရေး၏။
ဧရာဝတီ Thursday, March 25, 2010
အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ရေးရာ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ့တ် ကမ်းဘဲလ်
ဖြေ။ ။ အစိုးရပိုင်းနဲ့ တပ်မတော်ထဲက သူတွေကို ပြောလိုတာကတော့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အတိုက်အခံပြုနေသူတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ပြောချင်တာနဲ့ အတူတူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောပြီး ဒီမိုကရေစီ ထွန်းကားတဲ့ နိုင်ငံတခုအဖြစ် မြင်တွေ့လိုပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ရည်မှန်းချက်ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ကြသူတွေနဲ့လည်း ကျနော်တို့ အတူ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ။